Ku soo dhawow Kala duwanaanshaha
Guddigeena iyo bulshada ayaa loo naqshadeeyay sida barnaamijka meesha AAD uga qeybgeli kartid sumadaha iyo hay'adaha waaxda dadweynaha oo ka caawiyo go’aansashada badeecooyinkooda iyo adeegyada. Sidoo kale waad dhaxgeli kartaa xubnaha kale ee barnaamijkeena bulshada.
Sida xubin ka mid ah guddigeena iyo bulshada, waxaad ka qeybqaadaneysaa sahamo badan oo kala duwan meeshaas oo aad ku muujin kartid afkaarahaaga iyo fikradaha oo luuqad aad ku dareentay raaxo. Tani waa waxa aan ugu yeerno dimuqraadi iyo guddi kala duwan-horay u socdo!
Ka qeybqaadashada daraasadaheena, waxaad leedahay cod ganacsiga ah iyo go’aan gaarista dadweynaha iyo, qaabkaan, fursada lagu qaabeynayo mustaqbalka.
Guddigeena ayaa muujiyo dhaqanka iyo kala duwanaanshaha bulshada ee Sweden. Waa shir meesha xubnaheena guddiga ay ku dhiibtaan fikradahooda iyada oo looga qeybqaadanayo sahamada mowduucyo kala duwan oo aad heshid abaalmarin.
Yoolka ugu muhiimsan bulshadeena waa ahaanshaha illo waxku ool ah iyo xarunta wadaagista. Bulshadeena waa bog meesha xubnaha guddigeena ay dhaxgeli karaan midba midkale, ka hadal danahooda la wadaagay, oo ka qeybgal arimaha hadeer iyo dhacdooyinka.
Ku soo biir guddigeena
Iyo kaliya dhowr taabashooyin, waxaad noqon kartaa xubin ka mid ah guddiga cilmi baarista kala duwan ee ugu badan Sweden.
Markii aad is diiwaangelisid, waxaad u baahantahay inaad gelisid ciwaanka email-kaaga, da’da, jinsiga, goobta iyo luuqada.
Dhammaan warbixinta iyo sahannada waxaa ay ku qoran yihiin dhowr luuqadood. Markii aad ka qayb qaadanayso sahannadeenna, waxaad dooran kartaa luuqada aad doorbidayso inaad ku jawaabto.
Sahamadeena ayaa si fudud oo dabacsan loo galaa. Waxay caadi ahaan qaataan dhoor daqiiqo, oo waad ka jawaabi kartaa markii ay kugu haboontahay. Dhammaan daraasadaha ayaa ku haboon mobeelka, u fudud ka jawaabida, iyo luuqado badan.
Ka qeybqaadashada, waxaad haysataa fursada lagu sheegayo fikradaada oo lagu qaabeynayo mustaqbalka.
Waxaan daboolnaa maadooyin weyn oo kala duwan iyo daraasado, marka marnaba caajis ma ahan.
Waxaad heleysaa dhibcaha sahan walba ee aad qaadatid. Tirada dhibcaha waxay quseysaa baaxada sahanka. Sida badan ee aad ku firfircoontahay ka qeybqaadashada sahamada, dhibcaha badan ee aad heleysid.
Marka aad gaarto 100 dhibcood waad sarifan kartaa oo waxaad heli kartaa foojarrada GoGift. 100 dhibcood waxaa ay la eg tahay foojar hadiyad oo qiimihiisu yahay SEK 100. Foojarradan hadiyadda ah waxaa loo isticmaali karaa in ka badan 100 dukaan, munaasabadaha/hawlaha sidoo kalena waxaad u adeegsan kartaa deeq bixin.
Guddiga Kala duwan ee Sare u qaadayo Ka mid ahaanshaha